आँधी पूर्वको शान्ति | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
आँधी पूर्वको शान्ति
May 27, 2017 May 28, 2017 Dishanirdesh Kanchan0Comments
–थानेश्वर प्रसाद भट्ट
एकपछि अर्काे विचित्रका घटनाक्रमहरुले अनुमान गर्न नै मुश्किल परी रहेको आभाष हुन्छ । यसरी राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुमा समेत भिडन्तको स्थिति प्रकट हुनु दुःखद आश्चर्यको विषय भए पनि निकट भविष्यका घटनाक्रमहरुको पृष्ठभुमि निर्माण भएको पनि यथार्थ हो । हालै सम्पन्न स्थानिय मत परिणाम अनपेक्षित र कतिपयका लागि अस्वाभाविक पनि लागेका हुन सक्ने परिपे्रक्ष्यमा एमाले अध्यक्ष के.पी.ओलीले आफ्नो विजय भन्दा पनि कांग्रेसले पाएका मत प्रति दुःख आश्चर्य प्रकट गर्नु भएको हुनाले राष्ट्रवादी छवि बनिसकेको दललाई नै सम्पूर्ण जनताको मत जान्छ भन्ने दंभ आश्चर्यजनक छ रयसले क्षति र द्वन्द बढाउन मात्र सहायक हुन सक्ला ।
आन्तरिक कलह, अन्तरघात, नेतृत्वको असक्षमता, नियुक्तिहरुमा निहित स्वार्थ आदि विविध कारणले केही मात्रामा क्षति पु¥याएर पनि जुन मतान्तर देखियो त्यसलाई निराशाजनक मान्नु पर्ने कुनै कारण हुन सक्तैन । योग्य सक्षम प्रति बेवास्ताको परिणामले पनि निकै असर पर्न सक्छ भन्ने संकेत पनि होला । जे भए पनि मत परिणामबाट ३ दल मात्र अस्तित्वमा रहन सक्ने देखिए । सर्वाधिक आश्चर्य स्वनामधन्य कमल थापा र उनको रा.प्र.पा.लाई हुनुपर्दछ किनभने नयाँ एकिकृत दलका रुपमा अस्तित्व नै नरहने गरी पतन भएको छ ।
कुन धरातल भन्ने यथार्थ बोध भएकै होला । थ्रेस होल्ड वास्तवमा राजनैतिक आवरणमा विना जनाधार राष्ट्राध्वज सम्म धारण गर्न सक्ने चिठ्ठा परेकाहरुका लागि चित्कार र पतन गराई दिएको छ । आउदा दिनहरुमा मुश्किलले ३÷४ दल मात्र जीवित रहने र मठाधीशहरु लुप्त हुने स्पष्ट परिणाम प्रारम्भ भएको छ । नेपालमा के भयो र हुन लागेको छ यसका सांकेतिक चिन्ह एकपछि अर्काे प्रकट हुदै छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचन संभवतः यति सहज र परिणामदायी होला या पहिलो चरणको मत परिणामलाई निरर्थक पार्ला यस सम्बन्धी सामयिक चर्चा र प्रसंग गर्नु वान्छनिय लागेको छ । तराई तर्फ निर्वाचनमा भाग नलिने मात्र होइन हुनै नदिने हाक हामी मदीसेहरुबाट बारम्बार प्रकट भइरहेको छ ।
संविधान संशोधन लगायतका माग पुरा हुनुपर्ने त्यो पनि हाम्रै सर्त र चाहना बमोजिमको अडान आँधी पूर्वको शान्ति जस्तै होइन ? १९÷२० जना मर्दा गणतन्त्र आउने तर सैकडौं मदीसे मर्दा संविधान संशोधन समेत नहुने विभेद सह्य नहुने धम्की पनि हामी मदीसेहरुका तर्फबाट आइ सकेको छ ।
संभवतः यो लेख प्रकाशित हुदा सम्म केही घटित हुन सक्ने यथेष्ठ आधार छन् । नेपाललाई एक राष्ट्रका रुपमा स्वीकार नगर्ने खुलेआमका चुनौती आइ रहेका छन् । निर्वाचनबाट लगभग समाप्त भएका, समानुपातिक बाट स्वास्नी, साली लगायतका नातागोता भर्ना गर्ने समुह त्यसरी राष्ट्रलाई नै चुनौती दिन सक्ने सामथ्र्य कसरी र कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो गहन अनुसन्धानको विषय बनि यथार्थ सूचना सर्वसाधारणलाई मिल्नु पर्दछ तर सुचित नगरे कसले के नै गर्न सक्छ । खुलेआम राजस्व छलि, ठेक्कापट्टा, गैरकानूनी रुपमा सरकारले बाडी रहेको निर्वाचन आचारसंहितकाको धज्जी उडाउँदै नियुक्ति सरुवा बढुवा बर्खासी लगायतमा निर्वाचन आयोगबाट कुनै अवरोध भएको देखिदैन ।
राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय कानूनको विपरित भयङ्कर अपराधीहरुलाई राजनीतिका नाममा मुद्दा फिर्ताका निर्णय हुन्छ, स्थानिय तहको संख्या आयोगलाई जानकारी सम्म नगराई बढाइन्छ यद्यपि विपक्षी एमालेबाट झिनो विरोधका स्वर आएपनि प्रभावी कति होला यो एउटा पक्ष हुन सक्छ तर यी विविध गतिविधिको निहितार्थ जे सतहमा देखिन्छ त्यही हो वा पृष्ठभुमि भिन्नै छ जो यो चिन्तनिय विषय छ ।
नेपालमा भइ रहेका व्यापक उथलपुथल लाखौं करोडौं पनि होइन अब त हिसाब अरबौंमा पुगी सकेको छ । जे मा पनि घूस, लुटमा भागबण्डा नपाए विरोध लगायतका गतिविधिबाट परिवर्तन लुटतन्त्र कै लागि भएको रहेछ भन्नेमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ रहेन ।
ऐन कानून संविधान निर्धाहरुका लागि मात्र भएको भन्ने विभिन्न घटनाक्रमबाट प्रमाणित भइरहेको छ र कसले कहाँबाट कति लुट्न सक्छ ? त्यसैमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको हुनाले यसको पराकाष्टा नभए सम्म निरन्तरता मिलि रहनु पर्दछ तब मात्र विष्फोटक स्थिति निर्माण हुनेछ । यी समग्र विषयहरुमा हामी सर्वसाधारणले दुःख पाइ रहेपनि निरपेक्ष जस्तै छौं । कुनै सरोकार सामथ्र्य नभएका थकित वर्गका लागि जननि मातृभुमि आफै त बोल्न सक्तैन । त्यसैले असल खराब जे भए पनि त्यसका नियन्ता पनि हामी हुन सक्तैनौं ।
यथास्थितिमा यी व्वाँसाहरुको अराजक भ्रष्ट गतिविधिले निर्वाध अनियन्त्रित नै रहला भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ । कसको समय कुन बेला पुग्छ यो भन्न निकै कठिन भएपनि असफल राष्ट्रमा रुपान्तरित हुने यथेष्ठ पृष्ठभुमि निरन्तर बनिरहेकोले यसलाई आँधी पूर्वको शान्ति जस्तै देखिए पनि वस्तुतः रेचन प्रक्रियाले समग्र विकार त निश्चय पनि बाहिर प्रकट होलान् । सायद त्यसपछि केही स्थिरता आउला कि ?
← किन हुन्छ शिक्षण संस्था माथि हमला ?
देशमा दुई थरीका मानिस छन् →